Hello Nepal News » मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान !
मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान !
प्रायः मानिस समय बचाउनका लागि राति सुत्नेबेलामा मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्ने गर्छन् । तर, यसरी रातभरि फोनलाई चार्जमा राख्दा मोबाइलको ब्याट्रिको आयु कम हुनका साथै दुर्घटनाको पनि जोखिम हुन्छ ।
निरन्तर चार्जमा राख्दा आगो लाग्ने समस्या पनि निम्तिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । प्राविधि विद्हरुका अनुसार मोबाइल चार्ज गर्दा जल्न सक्ने वस्तुमाथि राख्न हुँदैन् । फोन सिरानी मुनि राखेर सुत्न हुदैन् । चार्जमा राख्दा खाट वा कुनै जल्ने तथा छिट्टै आगो समात्ने समान माथि पनि राख्न हुँदैन ।
ब्याट्रिको ‘थर्मल रनवे’ लगातार तातिरहने गर्छ । त्यसैले ब्याट्री चार्ज गर्दा काठको टेबलमाथि राख्नु उचित हुन्छ । सकेसम्म सधैँ मोबाइल फोनसँगै आएको चार्जर अर्थात् फोनको ओरिजिनल चार्जर मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ ।
मोबाइल छेउमा राखेर सुत्दा हानिकारक रेडियेसनहरू आउन सक्छ् । जानकारहरू मोबाइललाई स्वीच बन्द गरेर सुत्नु उपयुक्त मान्छन् । आकाश गड्याङगुडुङ गरेको समयमा चार्ज गरिरहेको मोबाइलको ब्याट्री जल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५३